ကုန်ပစ္စည်း Parameters ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်လက္ကားစက္ကူအိတ်ပုံနှိပ်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်လက်ဝတ်ရတနာထုပ်ပိုးရန်အတွက်လက်ဆောင်အိတ် / kraft အိတ်အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းအနုပညာစက္ကူပုံနှိပ်လိုဂို, ကတ်ထူပြားစက္ကူ, စသည်တို့, ပုံနှိပ်ပိုးပိုးမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်, အပူလွှဲပြောင်း, offset, နေ, စသည်တို့ကြိုးကြိုး, သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် Packing 10pcs / opp အိတ်, 100pcs / carton အသုံးပြုမှုစျေးဝယ်အိတ်, ပရိုမိုးရှင်းအိတ်, ထုပ်ပိုးအိတ်, လက်ဆောင်
စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးကောင်း Custom Gold Stamping Logo White Kraft Paper Bag
ပစ္စည်း Kraft စက္ကူထုပ်ပိုးအိတ်အရွယ်အစား 30(L)*4.5(ဇ)*30(ဇ)စင်တီမီတာ ( သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ) ပုံနှိပ်ခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုနိုင်အထူ kraft paper အသုံးပြုခြင်းအွန်လိုင်းဆိုင်အသုံးပြုခြင်း， ထုပ်ပိုးခြင်းပွဲတော်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးခြင်းလက်ကားကုန်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုး MOQ 1000pcs ထုပ်ပိုးခြင်းအထူး K = K တင်ပို့သည့်ပုံးထုပ်များကိုထုတ်လုပ်သည့်အချိန် ၂၀ ရက်ခန့်ကုန်သေတ္တာတစ်လုံး ၂၀ ကီလိုဂရမ်…
FSC အသိအမှတ်ပြုလက်လီစျေး ၀ ယ်ခြင်းသို့ ၀ ယ်သည်
ကုန်ပစ္စည်းအမည် FSC အသိအမှတ်ပြုလက်လီစျေးဝယ်ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသူစိတ်ကြိုက် Kraft Paper Bag အမှတ်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများစက္ကူနှင့်အတူ, Kraft စက္ကူ, ဆင်စွယ်ဘုတ်အဖွဲ့, duplex ဘုတ်အဖွဲ့, အထူးစက္ကူ, အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်ကိုင်တွယ်ဖဲကြိုး, စစကြိုး, ဝါဂွမ်း, နိုင်လွန်, လိမ်, ပြားချပ်ချပ်စက္ကူ, သေ - ဖြတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်လက်ကိုင်,စသည်တို့ကို Surface ပြီးအရောင်တင်ဆီ, တောက်ပ / Matt lamination, ရွှေငွေရောင်သတ္တုပါး…
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် 1.Feature: တိုက်ခန်း,ခေါက်သည်,ဇိမ်ခံ 2.Material: 157ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 2mm မီးခိုးရောင် board.or နှင့်အတူဂအနုပညာစက္ကူ. 3.အရွယ်အစား: စိတ်ကြိုက် Welcome 4.Color: CMYK အရောင်အပြည့်အစုံ,ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအဖြစ် Pantone အရောင် 5.Logo&ဒီဇိုင်း: စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏မှိုများ ၆,ပုံနှိပ်ခြင်း,ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ,စသည်တို့ကို 7.Packing: 1polybag အတွက် PCs,10-35pcs in5အလွှာစံမြှောင်းပုံပို့ကုန်ပုံး 8.Weight: အရွယ်အစားအပေါ်အခြေခံသည် & ပစ္စည်း,အထူ ၀ ယ်ယူရန်အချက်အလက် ၉.၁ အနည်းဆုံးအမှာစာ…
ဇိမ်ခံအနက်ရောင်လက်ဆောင်စက္ကူအိတ်ပုံနှိပ်ထားသော Logo လက်ဝတ်ရတနာများထုပ်ပိုးခြင်းဖဲကြိုးလက်ကိုင် Kraft ဈေးဝယ်စက္ကူအိတ်
ပစ္စည်းအမည် Kraft စက္ကူအိတ် Usage စျေး ၀ ယ်ခြင်း ,အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆုလက်ဆောင်,လက်လီအရောင်းဆိုင်များ, ထုပ်ပိုး, စသည်တို့. ပစ္စည်း Coated စက္ကူ, kraft စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, အထူးစက္ကူ, စသည်တို့. Eco-friendly အင်္ဂါရပ်,ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်,အကြမ်းခံပြီးတိကျမှန်ကန်သောကောင်းသောပုံနှိပ်ခြင်း. အရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစား. အရောင်အပြည့်အဝ CMYK သို့မဟုတ် Pantone အရောင်များ. ဖဲကြိုးကိုင်တွယ်, ဝါဂွမ်း, စစ, လိမ်, ချစ်တယ်, သေဆုံး, နိုင်လွန်ကြိုး, အပြားသို့မဟုတ်
အက္ခရာစာလုံးပါသည့်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသော kraft စက္ကူအိတ်
ပစ္စည်း။ အနက်ရောင်လိုဂိုပါသည့်ရိုးရှင်းသော kraft စက္ကူအိတ်အရွယ်အစားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းအနုပညာစက္ကူ, ကတ်ထူပြားစက္ကူ, စသည်တို့, ပုံနှိပ်ပိုးပိုးမျက်နှာပြင်စိတ်ကြိုက်, အပူလွှဲပြောင်း, offset, နေ, စသည်တို့ကြိုးကြိုး, သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် Packing 10pcs / opp အိတ်, 100pcs / carton အသုံးပြုမှုစျေးဝယ်အိတ်, ပရိုမိုးရှင်းအိတ်, ထုပ်ပိုးအိတ်, လက်ဆောင်အိတ်အင်္ဂါရပ် & ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်…
ပစ္စည်းအမည် 1000pcs MOQ ထုံးစံအမှတ်အသားပြန်သုံးနိုင်သောစျေးဝယ်လက်ဆောင် kraft စက္ကူကုန်စုံအိတ်လက်ကိုင်အိတ်နှင့်အညိုရောင် kraft စက္ကူအိတ် Usage ကိုလက်ရှိ, စျေးဝယ် ,အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆုလက်ဆောင်,လက်လီအရောင်းဆိုင်များ, ထုပ်ပိုး, စသည်တို့. ပစ္စည်း Coated စက္ကူ, kraft စက္ကူ, အနုပညာစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, အထူးစက္ကူ, စသည်တို့. Eco-friendly အင်္ဂါရပ်,ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်,အကြမ်းခံပြီးတိကျမှန်ကန်သောကောင်းသောပုံနှိပ်ခြင်း. MOQ 1000pcs အရွယ်အစားမဆိုအရွယ်အစား. အရောင်…